Breaking News: Our Youth Players in Myanmar U-17 Team, Kyaw Ko Ko Oo and hein Htet Zaw, which players playing in MNL Youth Competition as team as MFF Youth. ရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီ မှ မြန်မာယူ-၁၇ အသင်းတွင်ရွေးချယ်ခြင်းခံထား ရသော ကစားသမား(၂)ဦးဖြစ်သည့် ကွင်းလယ်လူဟိန်းထက်ဇော်နှင့် နောက်ခံလူ ကျော်ကိုကိုဦး တို့ကိုတွေ့ရစဉ်( မြန်မာယူ-၁၇အသင်းမှာ ယခုနှစ်မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ်-၁ လူငယ် အမှတ် ပေးပြိုင်ပွဲတွင် MFF Youth အသင်း အဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လျက်ရှိသည်။) ‪#‎RUFC‬
ON THIS DAY: December 15,2014. Rakhine United FC Cup 2014 Tournament have been Compeleted in Danyawadi Stadium , Sittwe. ‪#‎RUFC‬
၂ပွဲဆက်နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၈)ရက်နေ့ ညနေတွင် ကစားရမည့်ချင်းယူနိုက်တက် နှင့်ပွဲစဉ်ကို ကစားသမားများအနေဖြင့် အာရုံစူးစိုက်မှု အပြည့်ဖြင့်ရာနှုန်းပြည့်ကြိုးစားအားထုတ်ရ မည်ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြချုပ်ဦးဝင်းတင်က ပြောကြားလိုက်သည်။မြန်မာနေ ရှင်နယ်လိဂ်ပွဲစဉ်ပွဲစဉ်(၇)တွင် ရခိုင်ယူနိုက်တက်က မနောမြေအသင်းကို(၃-၀)ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ပွဲတွင် ကစားကွက်နှင့်လူနေရာချထားမှုအံဝင်သွားသဖြင့် တဘက်အသင်းအနေဖြင့် အခွင့် အရေးများ မ၇၇ှိခဲ့ကြောင်း၊ တိုက်စစ်မှူးအောင်စိုးမိုး ပေါင်ခြံဒဏ်ရာကြောင့်မပါဝင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ပြည်မိုး၊နိုင်နိုင်ကျော်နှင့် ဂျော်ဒန်တို့၏ တိုက်စစ်တွဲလုံးများဖြင့် တဘက်နောက်တန်းကိုဖိအားပေး နိုင်ခဲ့သည့်အပြင် သွင်းဂိုး ၃ဂိုးရရှိခဲ့ခြင်းအတွက်လည်း ကျေနပ်မိကြောင်း နည်းပြချုပ်ကဆိုသည်။ ဆက်လက်ပြီး လာမည့်ပွဲစဉ်တွင်တွေ့ရမည့် ချင်းယူနိုက်တက်မှာ အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ် ကြောင်းနှင့် လက်ရှိချန်ပီယံ ရတနာပုံအသင်းကိုဂိုးပြတ်သွင်းယူကာအနိုင်ရထားသောအသင်းတစ် သင်းဖြစ်သဖြင့် အထင်သေး၍မရကြောင်းနှင့် ကစားသမားများအနေဖြင့် ထိုပွဲကိုအာရုံစူးစိုက်မှုအ ပြည့်ဖြင့် ကစားမှသာ ၇လဒ်ကောင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း '' ချင်းယူနိုက်တက်ကရတနာပုံလို လက်ရှိချန်ပီယံကို အနိုင်ရထားတဲ့အပြင် ရှေ့ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ရလဒ်ကောင်း တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းပါ။ လိဂ်ပွဲတွေ ရဲ့ သဘောသဘာဝအရ အထင်မသေးသင့်သလို ကြောက်ရွံ့နေဖို့ လည်းမလိုပါဘူး။ အခုဆိုရင် ၂ပွဲဆက် နိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့အတွက် ကစားသမားတွေ ယုံကြည်မှု ၇ှိနေပြီး ရာနှုန်းပြည့်အား ထုတ်မှု နဲ့ ကစားမယ်ဆိုရင် ရလဒ်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်''ဟု အသင်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာနေ၇ှင်နယ်လိဂ်အမှတ်ပေးဇယားဆင့်(၇) နေရာတွင်ရပ်တည်လျက်ရှိသော ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ပွဲစဉ်(၈)တွင် ချင်းယူနိုက်တက် ၊ပွဲစဉ်(၉)တွင် ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်အသင်းတို့ နှင့်ကစားရမည်ဖြစ်ပြီး ပထမအကျော့ မပြီးဆုံး မီ(၂)ပွဲအလိုတွင် ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိဂ်ပြိုင်ပွဲများခေတ္တ ရပ်နားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။